Ma dhab baa xorriyadda saxaafadeed ee uu Dhabancad ku faanay inay ka jirto Puntland?!! (Arag shin-tiriskan) | Hadalsame Media
Home Maqaallada Ma dhab baa xorriyadda saxaafadeed ee uu Dhabancad ku faanay inay ka...
Ma dhab baa xorriyadda saxaafadeed ee uu Dhabancad ku faanay inay ka jirto Puntland?!! (Arag shin-tiriskan)
(Garoowe) 07 Maarso 2021 – Wasiirka Arrimaha gudaha Puntland, Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad, oo xalay marti ku ahaa bar-kulanka Club House, ayaa sheegay in suxufiyiinta Puntland ku shaqeeyaan xorriyad aysan helin weriyaasha kale ee Soomaaliyeed.
Madaxweyne Deni oo la doortay 8-dii Jannaayo 2019, wuxu xilka hayaa mudda laba sanno iyo saddex bilood ah, waxaana mudadaas Puntland lagu xiray ilaa 8 suxufi oo ka hawl-gelayay warbaahinta kala duwan.
13 Luulyo 2019, Booliiska Garoowe ayaa xabsiga dhigay suxufi madax-bannaan Maxamed Siciid Yuusuf (Boqorka), kaas oo war ka duubay nabaddoon dowladda dhaliilay, waxaana la sii daayay 14 maalmood kadib markii wax danbi ah lagu waayay.
17 Oktoobar 2019, Booliiska Garoowe ayaa xiray suxufi Axmed Sheikh Maxamed Tallman oo ka tirsanaa Radio Daljir, kadib markii dowladdu dhibsatay war ka baxay idaacadda Daljir. Suxuf Tallman lix maalmood kadib ayaa la sii daayay, kadib markii uu raalli-gelin ka bixiyay warkaas.
5 Febraayo 2020, Booliiska Garoowe ayaa xabsiga dhigay suxufi Cumar Maxamed Soomane, kadib markii uu idaacadda Kulmiye ee Muqdisho ka sii daayay warar Puntland ka caraysiiyay. Hal habeen ayuu ku xirnaa Garoowe kadibna waa la sii daayay.
26 Diseembar 2020, Hay’adda Nabad-sugidda iyo Sirdoonka Puntland ee PISA ayaa xirtay weriye Kilwe Aaden Faarax oo eedaymo kala duwan loo jeediyay, islamarkaana laba jeer la xukumay, balse la sii daayay 22 March 2021 kadib markii madaxweyne Deni Cafis u fidiyay.
11 Jannaayo 2021, Ciidanka PMPF ee Puntland ayaa Boosaaso ku xiray suxufi Maxamed Cabdi Lakiman oo ka tirsan Radio Daljir, kadib markii uu qoray war la xiriira ciidanka, inkastoo la sii daayay lix saacadood kadib.
22 Febraayo 2021, Ciidanka madaxtooyada Puntland ayaa Boosaaso ku xiray suxufi Axmed Bootaan, saacado uun kadib markii uu shacab Boosaso ka duubay Ra’yi uruurin ku saabsan khudbad madaxweyne Deni jeediyay, waxaase la sii daayay maalintii xigtay.
25 Febraayo 2021, Booliiska Garoowe ayaa xabsiga u taxaabay weiye Cabdifitaax Cabdullaahi Faarax (Dalla’aan) oo isna shacabka Garoowe ka uruuriyay ra’yi ku saabsan khudbaddii madaxweyne Deni kaga hadlay xaaladda dalka. Cabdifitaax waxa la sii daayay kadib 2 saacadood oo uu xabsiga ku jiray.
W; Q: Cabdiraxmaan Ciide
Previous articleShirka Teendhada oo dib u furmay iyo beesha caalamka oo ay “wacdi” ka gaartey!!
Next articleDood qosol badan oo ka taagan in la baajiyo kulanka caawa ee Juve vs Napoli (Doodda oo sal macquula leh)